U Diyaargarowga Amniga iyo Degdegga ah - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay u heellan yihiin waxbarasho heer sare ah dhammaan ardaydeena jawi nabdoon. In kasta oo taxaddar kasta la qaadanayo si looga fogaado dhibaatooyinka, degmadu waxay maalgashatay ilo muhiim ah horumarinta, iyo qiimeyn joogto ah, hababka deg-degga ah ee daboolaya xaalado ballaaran oo dhici kara oo ka dhici kara xarumaheena. Shaqaalaha si wanaagsan ayaa loo tababaray, nidaamka degdega ah ayaa loo dhajiyaa tixraac iyo leylisyo ayaa dhaca xilliyada caadiga ah si loo hubiyo in si deg deg ah looga jawaabo mashaqo kasta.
Dhibaateynta, Rabshadaha, Takoorka ama Xoogsheegashada
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay mamnuucayaan dhibaataynta, rabshadaha, takoorista iyo xoogsheegashada dhammaan noocyada, oo ay ku jiraan ku saleysan jinsiyadda qofka dhab ahaan ama loo arko, midab, caqiido, diin, asal qaran, jinsi / jinsi (oo ay ku jiraan dhibaataynta ku saleysan aqoonsiga jinsiga iyo muujinta), xaaladda guurka, naafanimada, xaaladda la xiriirta kaalmada dadweynaha, nooca galmada, da'da, xaaladda fasaxa daryeelka qoyska ama xaaladda halyeeyga. Haddii adiga ama qof aad taqaanid uu la soo kulmay dhibaateyn, rabshad, takoorid ama xoog sheegasho iskuulka ama dhacdooyinka iskuulka la xiriira sabab kasta ha noqotee, waxaad sameyn kartaa warbixin si ay dhacdadu u baaraan degmadu.
Dhibaateynta, Rabshada, Takoorka ama Foomka Warbixinta Xoogsheegashada
Waxqabadyada iyo Taageerada Akhlaaqda Wanaagsan (PBIS)
Xeeladaha ugu wax ku oolka badan ee ka hortagga dhibaatooyinka waxaa ka mid ah qaabab looga dhigto ardayda ku mashquulsan iyo fasalka. Dugsiyadu waxay adeegsadaan Waxqabadyada iyo Taageerada Dabeecadda Wanaagsan (PBIS), oo ah qaab ku saleysan cilmi baaris ku saabsan waxqabadyada dugsiga oo idil oo loogu talagalay inay ardayda ku sii hayaan fasalka. Degmadu waxay abuurtay qorshe hirgelin oo siiya fursad wadaagga fikradaha, istaraatiijiyadaha iyo xalalka, iyo luqad ay wadaagaan xubin kasta oo shaqaale ah. Intaas waxaa sii dheer, fulinta degmada oo dhan waxay ka caawineysaa dugsiyada inay noqdaan kuwa ula kac ah oo ku saabsan ka caawinta ardayda inay bartaan waxyaabaha laga filayo iyo dabeecadaha wanaagsan, taas oo iyaduna kordhineysa ka-qeybgalka ardayda, mas'uuliyadda iyo dareenka lahaanshaha.
Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay leeyihiin habraacyo degdeg ah oo deg deg ah, iyo tababar ku habboon shaqaalaha si ay u hirgeliyaan nidaamyada, haddii dhibaato dhacdo. Ku dhowaad xaalad kasta, xukunka suulka ficil ahaan ee dhinaca jawaabeyaasha ugu horreeya ee dhibaatada xarunta degmadu waa sida soo socota:
Ka jawaab baahiyaha degdegga ah ee ardayda iyo shaqaalaha
Ogeysii maamulka degmada
Maamulka degmadu wuxuu abaabulaa ilaha degmada si uu u caawiyo gurmadka
Nidaamyo gaar ah oo leh kala duwanaansho ku saabsan nidaamyadan guud ayaa loo qoraa si ay si fudud u helaan shaqaalaha markay ku jiraan xaalad deg-deg ah xaalado badan oo dhibaatooyin ah.
Qorshaha xidhiidhka dhibaatooyinka ayaa la diyaariyey si loo hubiyo in macluumaadka saxda ahi si dhakhso leh u gaadho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska. Macluumaadka waxaa la siin karaa ilaha soo socda si ay dadweynaha uga helaan:
Email ugu dir qoysaska degmada iyo shaqaalaha
Ku dhaji bogagga Facebook iyo Twitter
Soo dhaweynta degmada iyo iskuulka
Xiriiriyaasha muhiimka ah ee degmada gudaheeda
Diyaargarowga degdegga ah
Dhismayaasha degmada iyo iskuulladu waxay leeyihiin Buugaagta Nidaamyada Deg-degga ah ee Degdeg ah oo ay dib-u-fiiriyaan had iyo jeer maamuleyaasha mas'uulka ka ah hoggaaminta kooxaha ka jawaabidda dhibaatooyinka. Maamulayaashu sidoo kale waxay raacaan jadwal jimicsi caadi ah sanad kasta si dib loogu barto shaqaalaha iyo ardayda nidaamka saxda ah ee daadgureynta, dib u noqoshada dib-u-celinta (haddii ay dhacdo dhacdo ka dhacda dhulka, ardaydu waxay ku noqdaan nabadgelyada dhismaha), iyo hoyga- carbinta goobta iyo qufulka taas oo ka dhigaysa ardayda badqabe nabadgelyada dugsiga iyo / ama fasallada.
Buug-tilmaameedka Nidaamka Degdegga ah
Kormeerka qorshahan waxaa mas'uul ka ah guddiga dugsiga. Dayactirka iyo hirgalinta qorshuhu waa masuuliyada kormeeraha guud iyo shaqsiyaadka loo igmaday la shaqeynta hay'adaha maxalliga ah ee ka jawaabidda xaaladaha degdegga ah. Qorshaha laftiisa waxaa loo abaabulaa laba qaybood oo kala duwan; “Qorshaha Aasaasiga ah” iyo taxane taxan xaashida waxqabadka shaqada iyo hababka gaarka ah ee halista.
Macluumaadka faahfaahsan ee liiska hubinta iyo lifaaqyada ayaa ka dhigaya kuwo xasaasi ah loomana tixgeliyo inay yihiin dukumiintiyo dadweyne. Inta badan macluumaadka loo baahan yahay si loo hirgeliyo qorshe sidan oo kale ah waa in loola dhaqmaa sidii kuwo xasaasi ah oo sidaa darteed lagu ilaaliyo gudaha shaqaalaha degmada iyo kuwa gurmadka ka jawaabaya. Qorshayaasha saxda ah, goobaha, jidadka, iyo hababka isgaarsiinta ayaa laga yaabaa inay macluumaad waxtar u yeeshaan argagixisada suurtagalka ah ama dambiilayaasha kale.
Qorshaha Aasaasiga ahi wuxuu bixiyaa fikradaha guud iyo meeleynta mas'uuliyadda, oo lala wadaagi karo dadweynaha. Hoos waxaa ku yaal Qeybta Qorshaha Aasaasiga ah ee Buug-gacmeedka.
Ujeedada qorshahan ayaa ah in la dejiyo doorka socda, joogtada ah ee amniga, amniga iyo maareynta xaaladaha degdegga ah iyo mas'uuliyadaha Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale ISD # 281 iyadoo la adeegsanayo afarta weji ee maaraynta xaaladaha degdegga ah - Yaraynta / Ka-hortagga, Diyaargarowga, Jawaab celinta iyo Soo-kabashada.
Yaraynta / Ka-hortagga ayaa ka hadlaysa waxa dugsiyadu samayn karaan si loo yareeyo ama looga takhaluso halista naf iyo maalba leh.
Diyaargarowgu wuxuu diiradda saarayaa geedi socodka qorshaynta taasoo keenaysa jawaab deg deg ah, iskudubarid leh oo wax ku ool ah oo ku saabsan dhibaatada.
Jawaabtu waxay u heellan tahay tallaabooyinka la qaadayo inta lagu jiro xiisadda.
Dib u soo kabashadu waxay ka hadlaysaa sida loo soo celiyo jawi waxbarasho iyo waxbaris xiisad ka dib.
Qorshahan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo Dugsiyada Xaafada Robbinsdale ISD # 281 in ay si deg deg ah oo deg deg ah wax uga qabtaan xaaladaha degdega ah inta ay ka shaqeynayaan baabi'inta ama yareynta suurtagalnimada dhacdo. Qorshahani wuxuu adeegsanayaa qaabdhismeedka Nidaamka Maareynta Dhacdooyinka Qaranka oo ay weheliso habab gaar ah oo khatar ah oo xoojiya dadaallada lagu badbaadinayo nolosha; ilaalinta caafimaadka iyo badbaadada ardayda iyo shaqaalaha; iyo in laga ilaaliyo hantida iskuulka khataraha sida dabiiciga ah u dhaca, cilladaha farsamada iyo dhacdooyinka aadanaha sababa.
Qaybaha qorshahani waxay khuseeyaan dhacdooyinka si toos ah ama si dadban u saameeya hal arday ilaa bulshada oo dhan. Dugsiyada Aagga Robbinsdale ISD # 281 sidoo kale waxay aqoonsan yihiin in shilalka dhici karaan ka hor, inta lagu jiro ama ka dib saacadaha dugsiga oo laga yaabo inay ka dhacaan xerada, inta lagu jiro howlaha dugsiga, inta lagu jiro safarka dugsiga ama ka baxsan xerada bulshada dhexdeeda.
Qorshahan wuxuu u adeegi doonaa hage hogaamiyaasha gargaarka inta lagu gudajiro dhacdooyinka ay tahay in go'aano muhiim ah laqaato, inta badan macluumaad aan ku filneyn, waqti ku filan iyo agab aan ku filneyn bilowga.
Qorshahani wuxuu bixinayaa qaab-dhismeed jawaab-celin deg-deg ah oo aasaasi ah, kaalinno lagu taliyay oo looga jawaabayo xaaladaha deg-degga ah iyo hababka degdegga ah ee halista gaarka ah.
Waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah
Jawaabayaasha Degdegga ah
Marka loo eego awoodda guddiga dugsiga, qorshahan waxaa fulin kara kormeeraha guud, maamulaha dhismaha, maareeyaha dhismaha ama wakiilka marka hanjabaad dhab ah ama khatar caafimaad iyo badbaado ama dhisme hanti ay jirto ama dhacdo kasta oo suurtagal ah oo si weyn u carqaladeysa hawl maalmeedka. .
"Degdeg" sida loogu adeegsaday qorshahan waxaa loola jeedaa xaalado dhowr ah oo dalbanaya waxqabad degdeg ah si loo ilaaliyo nolosha, loo ilaaliyo caafimaadka bulshada ama adeegyada muhiimka ah, ama loo ilaaliyo hantida. Xaaladda degdegga ah, kheyraadka jira iyo awoodaha ayaa ku filan inay la qabsadaan xaaladda.
“Musiibo” waxaa lagu qeexaa dhacdo kasta oo keenta dhaawacyo badan oo bini aadam iyo / ama carqaladeynta adeegyada caafimaadka bulshada ee aasaasiga ah ama dhacdo kasta oo u baahan heer jawaab celin ah oo ka baxsan howlaha caadiga ah ee hawlgalka, oo ay ku jiraan shaqaalaha, qalabka, ama shuruudaha keenista. Xaalad deg-deg ah ama musiibo ayaa lagu dhawaaqi karaa awoodaha dowladda hoose ama Guddoomiyaha sida lagu oggolaaday qaanuunka gobolka ama degmada.
"Qalalaasaha" waxaa lagu qeexaa dhacdo, ama dhacdooyin isdaba joog ah, oo la filaayo ama lama filaan ah, oo saameyn weyn ku leh hal qof ama in ka badan laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ku lug yeelan iskuulka oo dhan ama bulshada. Dhacdo ku lug leh rabshad, ama goobjoog u noqoshada rabshad, inta badan saameyn joogto ah ayey ku leedahay kuwa ku lugta leh. Saamaynta nafsaani-bulsho ee xiisaddu waxay sii jiri kartaa muddo dheer waxayna saameyn ku yeelan kartaa howlaha nafsaani-bulsho ee iskuulka ama bulshada. Faragelin la'aan, dhacdooyinka noocaas ah waxay isu beddeli karaan dhacdooyin baaxad weyn. Waxqabadyadan sida caadiga ah waxaa ka mid ah la-talinta kuwa ku lug leh adeegsiga farsamooyinka gargaarka degdegga ah ee cilmu-nafsiga, ka-sheekaysiga dhacdooyinka halista ah, adeegsiga "qolalka nabdoon" iyo hababka kale ee caafimaadka maskaxda u janjeedha.
Fikradaha soo socda ayaa aasaas u ah qorshahan:
Hal xaalad deg deg ah, tusaale ahaan dabka, burburka gaaska guud, iwm, ayaa dhici kara wakhti kasta digniin la'aan shaqaalaha dugsiga ay dhibaatadu saameyseyna ma awoodi karaan, mana sugi karaan jihada hay'adaha ka jawaab celinta deegaanka. Tallaabo ayaa loo baahan yahay isla markiiba si loo badbaadiyo nolosha loona ilaaliyo hantida dugsiga.
Xaalad deg deg ah ama musiibo, sida cimilo daran ama dhacdo walxaha halista ah, waxay ku dhici kartaa digniin yar ama aan lahayn iyadoo ay jiraan waxyeello fara badan, burburin hanti, iyo waxyeello deegaanka ah.
Dawlada hoose iyo tan gobolka ayaa laga yaabaa inay ku adkaato masiibo. Shaqaalaha iskuulka waxay lahaan karaan waxyar ama caawinaad ugu yaraan seddex maalmood ama ka badan masiibada kadib.
Dowladda iyo hay'adaha gargaarka waxay xooga saari doonaan ilaha kooban ee dhibaatooyinka ugu halista badan uguna halista badan nolosha.
Caawimaadda ka timaadda dowladda iyo hay'adaha kale ee federaalka waxay ku kabi doonaan dadaallada gobolka iyo kuwa maxalliga ah, laakiin kaalmada noocan oo kale ah waxay qaadan doontaa waqti in la codsado lana geeyo.
Walaaca ugu horeeya ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale ISD # 281 waxay noqon doontaa badqabka qoysaskooda. Shaqaaluhu waa inay qaadaan tillaabooyinka aasaasiga ah si ay u diyaariyaan guryahooda ka hor waqtiga iyagoo kaydinaya cuntada iyo sahayda marka lagu daro qorshaynta xiriirrada degdegga ah ee lagama maarmaanka ah.
Waa siyaasada Dugsiyada Xaafada Robbinsdale ISD # 281 in dammaanad qaad uusan muujineynin qorshahan nidaamka jawaab celinta oo dhameystiran. Maadaama shaqaalaha iyo ilaha laga yaabo inay buuxdhaafaan, Dugsiyada Xaafada Robbinsdale ISD # 281 waxay kaliya ku dadaali karaan inay sameeyaan dadaal kasta oo macquul ah oo looga jawaabayo iyadoo lagu saleynayo xaalada, ilaha, iyo macluumaadka la heli karo waqtigaas.
Ma jiro nidaam hawleed deg-deg ah oo dabooli kara xaalad kasta oo suuro gal ah oo suurtagal ah; sidaa darteed qorshahan waxaa loogu talagalay inuu bixiyo hagitaan guud iyo taxane mabaadi'da guud ee hagida ah. Shaqaalaha iskuulka iyo degmadu wali waa inay qiimeeyaan xaalad kasta oo ay la jaanqaadaan qorshaha si ay ula jaanqaadaan xaalada dhibaatada iyadoo lagu saleynayo macluumaadka iyo ilaha la heli karo waqtiga dhibaatada iyadoo lagu saleynayo macluumaadka, ilaha la heli karo iyo awooda shaqaalaha inay ku shaqeeyaan xaalad culeys badan oo qatar ah waqtiga dhibaatada.
Nidaamka Taliska Dhacdada waxaa loogu talagalay inuu ahaado mid jajaban lana jaanqaadi kara baaxadda iyo heerka ku habboon ee jawaab kasta oo ka timaadda dhacdooyin maxalli ah ama heer qaran ah. Lifaaqyada nidaamyada gaarka ah ee halista ayaa bixin doona faahfaahinta loo baahan yahay si qorshahan u noqdo mid shaqeynaya.